Ducooyin Awood Leh Oo Wiilkaygu Joojiyo Sigaar Cabista | QODOBADA SALAADA
Bogga ugu weyn Salaadda Ducooyin Awood Leh Oo Wiilkayga Looga Joojiyo Sigaar Cabista
Ducooyin Awood Leh Oo Wiilkayga Looga Joojiyo Sigaar Cabista
Maanta waxaan la macaamili doonnaa ducooyinka inankayga laga joojiyo sigaarka. Mid ka mid ah weeraradii ugu xumaa ee sheydaanku ku qaado cunuga labka ah ayaa ah u nuglaanshaha isticmaalka daroogada. Aayado badan ayaa lagu burburiyey meeshii lagu cabayey sigaar. In kasta oo ay hay'adda caafimaadku ka digtay in sigaar cabayaasha la filayo inay dhintaan iyagoo dhalinyaro ah, haddana weli waa wax lala yaabo aniga in rag badan oo dhallinyaro ah ay weli ku jiraan buugga sigaar cabista. Laakiin maanta, ilaahay wuxuu balan qaaday inuu samatabixin doono qofkasta oo balwad sigaar qabatimay, gacmaha ilaahay ayaa kugu soo dul degi doona wax walbana way kaa badali doontaa.
Aniga oo ah hogaamiye ruuxi ah, waxaan kula taliyay oo aan la tukaday waalidiin badan oo wiilashooda ay yihiin kuwa sigaar caba sigaarka, marijuana, xashiishadda, iyo dhammaantood raadiya daroogooyinka adag. Waxa aan ogaaday ayaa ah in wiilashaas wiilasha ah ee sigaar cabaya ay bilaabeen inay si kadis ah u sameeyaan. Sidoo kale, badankood waxay lahaayeen awoodo badan oo nolosha kahor intaysan bilaabin sigaar cabista. Si kastaba ha noqotee, markay bilaabeen inay kufsadaan ficilka, waxay bilaabeen inay lumiyaan miyir beel kasta oo nolosha ah waxayna ku sii jeedaan qiiqa sigaarka. Waxaan Ilaahay ka baryayaa in maanta, uu wiilkaaga ka samatabbixiyo sigaar cabista.
Waxaad isweydiin doontaa in wiilashaas isku beddelay dad aan bulshada dhexdeeda ahayn sigaar cabbistooda darteed Eebbe sidaas maku abuuray. Maya, Eebbe wuxuu qof walba u abuuray si gaar ah iyo ujeedo. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay waalidiinta inay u duceeyaan carruurtooda gaar ahaan markay weli yaryihiin oo baylah yihiin. Waa sameynta ama baabi'inta waalidka haddii carruurtoodu noqdaan wax wax xun u keenaya Ilaah iyo bulshada.
Laakiin waxaan Ilaahay ka baryayaa in naxariistiisa kan ugu sarreeya, aayatiin kasta oo dhimatay lagu soo noolaan doono magaca Ciise. Waxaan ku amrayaa maamulka jannada, wiilkaaga waa hadiyad xagga Eebbe ka timid, waa duco, Ilaahay wuxuu isaga ka dhigay il farxad leh oo aan murugo lahayn. Awood kasta oo sii waday inaad ka oohisid wiilkaaga wiilkaaga, waxaan ku baabi'inayaa awoodahaas dhiigga wanka. Waxaan ku duceysanayaa samatabbixin guud maanta, wiilkaas maanta la kulan lama ilaawaan ah oo uu la yeesho Rabbiga, kulan aan ka soo kaban doonin si deg deg ah, kulan noocan oo kale ah oo awood u leh inuu beddelo noolaha oo dhan, waxaan ka baryayaa nooca kulanka. in Saa'uul Ilaah la jiray markuu u socday Dimishaq oo magiciisii ​​iyo noloshiisii ​​wanaag ugu beddelay. Waxaan Ilaah ka baryayaa in wiilkaagu la kulmo noocan oo kale ah magaca Ciise.
Markaad bilawdo inaad adeegsato tilmaantan ducadda ah ee cinwaankeedu ahaa ducooyin xoog leh oo wiilkayga looga joojiyo sigaar cabista, waxaan ku baryayaa in caawimaaddu ay hesho wiilkaaga oo uu ku samatabbixin doono gacanta midig ee badbaadinta ee magaca Ciise.
Rabbi Ciisow, maanta ayaan hortaada imanayaa oo ku saabsan wiilkayga, waxaan si dhakhso leh ugu luminayaa shaydaanka. Cadawga ayaa hantiyay jiritaankiisa waxaanan si tartiib tartiib ah ugu lumineynaa sigaar cabista. Waxaan maanta ku imid hortaada maxaa yeelay waxaan ogahay inaysan jirin wax aadan hagaajin karin, waxaan kaa baryayaa in naxariistaada darteed, aad wiilkeyga ku hagaajiso magaca Ciise. Adigu waxaad tahay Ilaaha suurtagalka ah mana jiraan wax aan macquul ahayn oo aad samayn karto, waxaan ku baryayaa inaad xooggaaga ku beddesho wiilkayga magaca Ciise.
Waxaan ka hor imanayaa awood kasta oo lumisa aayaha dadka. Awood kasta oo ku dhaaratay inay baabi'iso masiirka wanaagsan ee aad ku abuurtay wiilka, waxaan ka baryayaa in awooda noocaas ah lagu baabi'iyo magaca Ciise. Rabbiyow adiga adaa u abuuray jinka aadan xakamayn karin, waxaan kaa baryayaa inaad ka cayriso jinka sigaar cabista wiilkayga magaca ciise.
Aabbaha Jannada, waxaan kaa baryayaa inaad maanta la kulanto wiilkayga. Kulan nololeed isbadal ku yimaada, kulanka oo badali doona naftiisa oo dhan, waxaan idinka baryayaa inaad maanta la jirtaan. Sayidow, waxaan rabaa inaad wiilkayga u muujiso naftaada, waxaan rabaa inuu muujiyo kanaga maanta magaca Ciise. Muujinta oo badali doonta aragtidiisa ku aadan sigaar cabista, muujinta oo badali doonta fikirkiisa ku aadan sigaar cabista, waxaan ka baryayaa inaad maanta tusi doonto isaga magaca Ciise.
Aabbo Sayidow, waxaad ku tiri eraygaaga in carruurtu yihiin dhaxalka Eebbe, Sayidow waxaan kaa baryayaa inaad wiilkayga ka badbaadiso jinniga sigaarka ku cabaya magaca Ciise. Waxaan Ilaah uga baryayaa inuu kala sooco isaga iyo asxaabta kale oo uu sheydaanku jidkiisa dhigay. Asxaabta isaga musuq maasuq ku kacaan, waxaan idinka baryayaa inaad maanta iyaga ku kala sooci doontaan magaca Ciise. Sayidow, nooca kala-guurka ee ka dhex dhacay Ibraahim iyo Luud, waxaan ka baryayaa in nooca kala-taggu ka dhex dhaco isaga iyo dhammaan saaxiibbadiisa xun ee magaca Ciise.
Rabbi Ciise, waxaan ku baryayaa in naxariistaada darteed, aad marijuana, sigaar, haramaha, iyo nooc kasta oo daroogo ah aad wiilkayga ugu keento sun. Waxaan kaa baryayaa inaad carrabkiisa beddesho oo aad ruuxaaga maanta ku maal gasho isaga. Ruuxaaga hanuunin doona kuna barbaarin doona, ruuxa ilaah ee nool ee ka adkaan doona inuu ka adkaado jirrabaadda sigaar cabista, waxaan ka baryayaa in ruuxdaasi maanta ku soo degto isaga oo wata magaca Ciise.
Aabbo Sayid, waxaan kaa baryayaa inaad wiilkayga ka caawiso inuu ka baxo xaaladan murugada leh. Sida Qorniinku u leeyahay ruuxu waa diyaar laakiin jidhku wuu itaal daranyahay. Waxaan Ilaah ka baryayaa inaad ka caawiso jirkiisa dhimanaya iska caabbinta rabitaanka sigaarka ee magaca Ciise. Waxaan ku baryayaa inaad adigu isaga xoojiso laga bilaabo maanta, waxaad isaga siin doontaa xoog uu iskaga caabiyo sheydaanka marka jirrabku mar kale ku yimaado magaca Ciise.
Sidaas oo kale, waxaan u ducaynayaa wiil kasta oo bannaanka ka jooga oo noloshu sigaar cabbtay, waxaan kaa baryayaa inaad ku caawiso iyaga oo ka baxa xaaladdaas magaca Ciise.
article PreviousDucada Ka Badbaadin Sigaar
Next articleDuco Loogu Tala Galay Inuu Ninku Sigaar Joojiyo
Shan Siyaabood Oo Loogu Tukado Dagaalka Ruuxa
Sida Loo Helo Hoggaaminta Rabbaaniga ah Eebbe
Qodobbada Salaadda ee Ruuxa Dambi Dhaafka
18 Qodobbada Salaadda Dagaal Oo Ku Saabsan Ka-hortagga Ciidammadda Guurka